Kedu ihe na-arụ ọrụ na otu esi enyere okike | Bezzia
Kedu ihe na-eme
Susana Garcia | 17/04/2021 10:00 | si ebi ndụ
Anyị na-ewepụtakwu ọtụtụ mkpofu ma ya mere ọ na-esiri ike na gburugburu ebe obibi agaghị emetụta ya. Anyị amatala na oke ịba ahịa na-eduga anyị n'ịmefu mkpofu ahịhịa kwa afọ. N'ihi ya, imegharị ihe aghọwo isi ihe iji belata mmụba a na mkpofu. Na upcycling bụ ezigbo na-emekarị na-elekwasị anya na imegharị ihe maka iji na iji melite ihe i nwere.
El upcycling a makwaara dika upcycling. Okwu a na - agwa anyị na ejiri ya mee ihe iji mepụta ihe dị mkpa, nke bara uru karịa ihe anyị nwere na mbụ, ya mere tinye okwu ahụ elu. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nnukwu echiche ịwepụta uru karịa na echiche nke imegharị na ọtụtụ na-ahụ na ọ bụkwa ihe bara uru.
1 Ebee ka eji eme ihe si?
2 Ntughari na ejiji
3 N'iji ya eme ihe na nka ma obu ochicho mma
Ebee ka eji eme ihe si?
Upcycling bụ okwu na-abụghị ihe ọhụrụ, ebe ọ bụ na ọ pụtara na ninties. Mana ọ gaghị abụ ruo narị afọ ọhụrụ mgbe okwu a ga-adị mkpa. N'ime afọ nke itoolu, mmetụta gburugburu ebe obibi adịghị ka nke dị mkpa mana ugbu a anyị amatala nke ọma nsogbu ndị ahịa na ụdị ndụ anyị na-eduga na-eke na okike n'oge dị mkpirikpi na ogologo oge. Ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ echiche a na-agbakwunye na ụzọ ndụ ọhụụ dịka ịba ama, nke metụtara iji ya ihe anyị nwere iji mepụta ihe ọhụrụ ma baa uru, ihe okike nke enwere ike iji ozo. Ọ bụ okwu dị ezigbo mkpa na ụwa ejiji na nka.
Ntughari na ejiji
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ abanyelarị na echiche ọhụrụ a kpamkpam. Ọ dị mfe ịhụ aha mmado n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agwa anyị na e mepụtara uwe ha site na akwa ndị ọzọ ejirila ya ma ọ bụ site na ihe ndị ọzọ dịka iko ma ọ bụ ihe plastik. Nke a na-eme ka anyị hụ na anyị abụghị naanị ịzụrụ ejiji, mana anyị na-azụkwa uwe nke sitere na ihe ejirila mee ihe ọhụrụ nke bakwara oke uru, na-eme ka ha baa uru ọzọ. Echiche dị na ejiji abanyela na enwere ụlọ ọrụ azụmahịa dị ka H&M ma ọ bụ Zara nke na-etinye ụdị uwe a. Lelee ihe ngosi a ma ị ga - ahụ na ejirila ihe ole na ole mee ọtụtụ ndị, yabụ ị ga - amata na ị na - elekọta gburugburu ebe obibi n'otu oge na - atọ gị ụtọ maka ejiji ọhụụ.
N'iji ya eme ihe na nka ma obu ochicho mma
Ebe ozo anyi puru ichota okwu a bu nka. Artwa nka ejirila ụdị okike mepụta ihe ọhụrụ na ihe ndị dịla adị ogologo oge. Taa enwere okwu iji kpọọ nke a ma ọtụtụ ndị na-ese ihe na-ekpebi inye ndụ ọhụụ na ihe ndị ọzọ ga-atụfu. O bu uzo ozo eji eji ihe ndi a eme ihe di nma, igbochi ha ka ha ghara idi ozo.
Banyere ịchọ mma, ị nwekwara ike ịchọta ụfọdụ echiche maka okwu a. Enwere oriọna ejiri kristal mee ma ọ bụ arụgharịrị ọla na textilesDị ka a hụrụ na ejiji, enwere ike ịmegharị textiles site na texti ochie ndị ọzọ a tụfuru atụfu. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ụlọ nke imegharị ihe ga-anọ n'ọtụtụ ụzọ. Ọbụna ịnụ ụtọ nka ma ọ bụ ịchọ mma na ejiji anyị nwere ike inyere gburugburu ebe obibi aka n'otu oge na ụdị mmata a bụ ihe dị mkpa taa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » si ebi ndụ » Kedu ihe na-eme
Ihe ị ga-eme mgbe ọzụzụ gasịrị
Igodo niile maka nzu agba